❤️ IGTV Shopping dia azo jerena ao amin'ny Instagram - Winches Club
Ny IGTV Shopping dia misy amin'ny Instagram izao
Nanambara ny Instagram tamin'ny fiandohan'ity volana ity fa manerantany izao ny fiantsenana IGTV.
Ny fahombiazana lehibe amin'ny fizarana fiantsenana dia aorian'ny fampahalalana vaovao, tantara sy lahatsoratra mivantana no nampiasain'ny orinasa sy tompona marika maro.
Instagram nitatitra fa manodidina ny 130 tapitrisa ny olona mijery lahatsoratra miantsena isam-bolana.
Nomena an'ireto tarehimarika ireto, nisy dikany tonga lafatra io Instagram fandefasana ny fiantsenana IGTV.
Ny tanjon'ny asan'ny fivarotana dia ny hanampiana ny orinasa hitombo hatrany ary, avy amin'ny Instagram, Ny 60% amin'ny mpampiasa dia manaiky mikaroka sy mahita vokatra vaovao ao amin'ny Instagram.
Raha mbola tsy nanangana ny magazay Instagram anao ianao, Manoro hevitra anao izahay hanao izany. Miova haingana kokoa noho ny hatramin'izay ny raharaha, ary ny endrika fivarotana dia nalaza be ho an'ny mpivarotra Insta.
Serivisy lehibe ho an'ny mpampiasa izy ireo tamin'ny fanampiana azy ireo hahatratra ny mpihaino azy amin'ny fomba mety sy mahomby kokoa..
Ny fanavaozana haingana sy ny fanovana nataon'i Instagram dia miantoka ny fitazomana ny mpampiasa azy ireo hosamborina. dia, alao antoka fa anisan'izany ianao ary alao ny mpihaino anao amin'ny fiantsenana IGTV.
Tokony hampiasa ny fiantsenana IGTV ho an'ny marikao ve ianao?
Ny fiantsenana IGTV dia fotoana iray mahaliana ho an'ny influencer sy mpamorona izay mampiasa ny sehatr'izy ireo hifandraisany amin'ny mpihaino azy, hahazoana vola fanampiny tsy misy ezaka.
Ny fiantsenana IGTV dia hamela anao hametaka ireo vokatra resahinao amin'ny horonan-tsarinao, mivantana amin'ireo horonan-tsary ireo.
Ity fampiasa ity dia mitovy amin'ny ahafahana manome marika ny olona amin'ny sary., fa amin'ny fanomezana marika ny vokatra kosa.
taloha, Ny mpampiasa dia voafetra tamin'ny fomba fanaovany dokam-barotra momba ny vokatra naroson'izy ireo tao amin'ny lahatsarin'izy ireo.
Misaotra ny mety hisian'ny tagging vokatra, tsy mila mamela rohy maro intsony ianao ao amin'ireo soratra amin'ny horonan-tsarinao.
Fitaovana matanjaka iray hafa ny fiasan'ny mpamatsy vola, fa any Etazonia ihany izy io izao no misy. Rehefa manerantany, hiova mandrakizay ny zavatra.
Ny fahaizana mijery vokatra, mikasika ny fividianana sy ny fizahana amin'ny Insta dia hanova ny fomba fampiasan'ny olona ny Insta hiantsenana.
Raha ny tena izy, Ny 70% amin'ny mpividy dia miverina amin'ny Instagram mba hijery vokatra vaovao.
Betsaka ny zavatra niova tato anatin'ny volana vitsivitsy, ary tokony ho azonao antoka ny fampiasana ireo fiasa rehetra misy amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra misy anao mba hampitomboana ny fahombiazanao.
Ny hoavin'ny fiantsenana IGTV
Ny fiantsenana IGTV dia vonona hiroborobo ary mety ho lasa fomba tsara indrindra hisarihana ny mpanjifanao.
Misaotra ny endrika video, maneno ary izao amin'ny dikanteny, mora azo kokoa noho ny hatramin'izay ny atiny. Arakaraka ny fahazoana miditra bebe kokoa ny atiny, ho lehibe kokoa ny mpihaino anao. Izany dia marketing amin'ny voninahiny rehetra.
Nandritra ny areti-mandringana, Nandia ezaka be ny Instagram mba hamoahana endri-javatra vaovao toy ny asan'ny fivarotana, ny kaody QR ary izao ny IGTV Shopping.
Ny tanjon'izy ireo dia ny manampy ireo orinasa, marika, ny influencers sy ny olona hahatratra ny fara heriny farany.
Tokony tena handray an'ity indray mitoraka ity ianao ary hamerina hanova ny paikadim-barotrao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny ankamaroan'ny fiasa arosony..
Ahoana ny fakana ny mpihaino anao amin'ny horonan-tsary
Raha te hahazo tombony betsaka amin'ny fiantsenana IGTV ianao, aloha mila maka antoka ianao fa afaka mifandray amin'ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny horonan-tsary.
Ny horonan-tsary dia mety ho fomba matanjaka sy mora hampitomboana ny fisianao Insta, miankina amin'ny fomba ahafahanao mifandray sy miditra amin'ny lalina amin'ny mpihaino anao.
Mampiseho ny fanoloran-tenanao ireo horonan-tsary ary azo ampiasaina mora foana hizarana ny tantaranao. Tsy vitan'ny manolotra varavarankely amin'ny zavatra niainanao ianao, fa ny mpihaino anao koa afaka mahatsapa ny fitiavanao ny zavatra tompoinao.
Misy fomba maro hifandraisana amin'ny mpihaino anao, ohatra:
• Asongadino ireo toetran'ny vokatra
• Manolotra vokatra vaovao
• Votoatiny miavaka alohan'ny fanombohan'ny vokatra
• Ho an'ny fanabeazana
Araho ny torolàlana etsy ambany momba ny fomba fampidinana horonan-tsary ary manomboka mizara ny tantaranao amin'ireo mpankafy anao anio..
Lahatsoratra teo alohaAhoana ny fomba hijerena ny fijerena Tik Tok – Torolalana mampahalala
Lahatsoratra manarakaNy zava-drehetra momba ny fizahana Instagram